Ukwenziwa kweTire |
Ukuphuhlisa ukuza kuthi ga ngoku, umgca wokuvelisa itayara usebenzisa ibhanti le-PVC, ibhanti yerabha, i-roller, isinyithi esihambisayo ukuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi bokugqibela-ukubuyisela umsebenzi wezandla ngomatshini, ngelo xesha, imarike yatyhalwa ngesicelo. Kamva, ngamandla omthamo, i-automation, ukusuka kwi-indiv...
Sinikezela ngezisombululo ezilungiselelweyo ezivumela abathengi bethu ukuba bafezekise iinjongo zabo kunye nokunciphisa iindleko. Iinguqulelo ezisemgangathweni zeHong's Belt zingqinwe ukuba zonyusa isimilo sabasebenzi, zivumela abavelisi ukuba bafikelele kwincopho yabo yemveliso. Inkonzo elungiselelweyo ye-Hong's Belt kunye nesiqinisekiso...
Thina, HONGSBELT, sibonisa umgangatho wethu ophezulu kunye nokuveliswa ngokutsha ngokuzisa rhoqo izinto ezintsha. Emva kwentsebenziswano eyimpumelelo kunye nabathengi bethu, siye saphuhlisa inani elikhulu lezisombululo zebhanti ezikhethiweyo zokwenziwa kwamatayara. Ngenxa ye-advant ecacileyo ...